ETU IBUDATA EGWU SITE NA ỤMỤ KLAS GỊ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata egwu site na ụmụ klas gị na kọmputa, n'isiokwu a ị ga-enwe ike ịchọta ụzọ dị iche iche n'otu oge iji mee nke a, nke dabara maka ọnọdụ dị iche iche.
Ị nwere ike bulite faịlụ ọdịyo na kọmputa gị site na iji tinye-ons (protensions) na plug-ins maka Google Chrome, Mozilla Firefox ma ọ bụ Opera nchọgharị, ma ọ bụ iji usoro free iche iche wepụtara iji budata egwu si Odnoklassniki. Ị nweghịkwa ike iji mgbakwunye na mmemme ọ bụla ọzọ, ma budata egwu site na iji nchọgharị na nkà dị mfe. Tụlee nhọrọ niile, ma kpebie onye ị ga-ahọrọ.
Anyị na-ebudata egwu site na ụmụ klas gị na-eji naanị nchọgharị
Ụzọ a iji budata egwu site n'aka ụmụ klas gị dị mma maka ndị dị njikere ma nwee mmasị ịchọta ntakịrị ihe banyere ihe bụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ozugbo na ngwa ngwa - gaa n'ihu na nhọrọ ndị a. Uru nke usoro a nke nbudata faịlụ egwu sitere na netwọk Odnoklassniki bụ na ị na-eme ihe niile aka, ya mere ịkwesighi ịwụnye mgbatị ma ọ bụ mmemme nchọgharị, ọ bụ ezie na free, na-ejikarị mgbasa ozi ma ọ bụ mee mgbanwe ụfọdụ na kọmputa.
A na-ezubere ntuziaka maka Google Chrome, Opera na Yandex nchọgharị (nke ọma, Chromium).
Nke mbụ, meghee ọkpụkpọ egwu na Odnoklassniki na, na-enweghị ebido ọ bụla songs, pịa aka nri n'ebe ọ bụla na ibe, wee họrọ "Lee koodu ihe". Njikwa ihe nchọgharị na-emepe na koodu ihuenyo, na ya họrọ Network taabụ, nke ga-ele ihe dị ka onyinyo dị n'okpuru ebe a.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmepụta egwu ịchọrọ ibudata ma deba ama na ihe ọhụụ apụtawo na njikwa, ma ọ bụ kpọọ na adreesị ozi-e na Ịntanetị. Chọta ihe ebe Ụdị Ụdị bụ "ụda / mpeg".
Pịa adreesị nke faịlụ a na kọlụm kachasị elu na bọtịnụ òké aka ma họrọ ihe "Mepee njikọ na tab ọhụrụ" (mepee njikọ na tab ọhụrụ). Ozugbo nke a gasịrị, dabere na ntọala nke ihe nbudata ihe nchọgharị gị, ma ọ bụrụ na music download na kọmputa na nchekwa Downloads ga-amalite, ma ọ bụ windo ga-egosi ịhọrọ ebee ibudata faịlụ ahụ.
Eleghị anya usoro kachasị ewu ewu iji budata egwu si Odnoklassniki - SaveFrom.net nnyemaaka (ma ọ bụ Savefrom.net helper). N'ezie, nke a abụghị usoro ihe omume, kama mgbakwunye maka ihe nchọgharị niile na-ewu ewu, maka ntinye nke ọ na-adaba adaba iji installer site na saịtị onye mmepụta.
Nke a bụ ibe na ebe nrụọrụ weebụ a na webata nke Savefrom.net, nke mere ka ị nwee ike ibudata egwu si weebụsaịtị Odnoklassniki, ebe ị nwekwara ike ịwụnye mgbatị a: //ru.savefrom.net/8-kak-skachat-odnoklassnini-music-i-video/ . Mgbe echichi, mgbe ị na-akpọ egwu, bọtịnụ ga-apụta n'azụ aha nke abụ maka nbudata na kọmpụta - ihe nile bụ nke mbụ na nke a kwenyere na ọbụna onye ọrụ novice.
OK Na-echekwa ndọtị ntanetị maka Google Chrome
Ihe mgbakwunye na-esonụ ga-eji na ihe nchọgharị Google Chrome, ma a na-akpọ OK Na-echekwa Audio. Ị nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa Chrome, maka nke ị nwere ike pịa bọtịnụ ntọala n'ime ihe nchọgharị ahụ, họrọ Ngwaọrụ - Nwepụ, wee pịa "Nrịgharị ọzọ", wee jiri nyocha ahụ na saịtị ahụ.
Mgbe ị wụnye ndọtị a, bọtịnụ ga-apụta na onye ọkpụkpọ na weebụsaịtị Odnoklassniki na-esote ọ bụla song ibudata egwu na kọmputa gị, dịka e gosiri na foto dị n'elu. Na ikpe site na nyochaa, ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe afọ ojuju maka ọrụ nke OK Ịchekwa Audio.
OkTools maka Chrome, Opera na Mozilla Firefox
Ebube ọzọ dị mma maka nzube a ma rụọ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nchọgharị niile bụ OkTools, nke bụ ihe bara uru nke Odnoklassniki netwọk mmekọrịta na ikwe, n'etiti ihe ndị ọzọ, nbudata egwu na kọmputa gị.
Ịnwere ike iwunye ndọtị a site na ụlọ ahịa ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ site na saịtị nke onye mmepụta oktools.ru. Mgbe nke ahụ gasịrị, bọtịnụ ga-apụta na ihe ọkpụkpọ maka nbudata na, Ọzọkwa, ị nwere ike ibudata ọtụtụ songs ahọpụtara n'otu oge.
Tinye-na Download Enyemaka maka Mozilla Firefox
Ọ bụrụ na ị na-eji Mozilla Firefox, mgbe ahụ ibudata faịlụ egwu site na weebụsaịtị Odnoklassniki ị nwere ike iji ihe ntinye aka na Video Download Hel, nke, n'agbanyeghị aha na-ekwu banyere vidiyo, nwekwara ike ibudata egwu.
Iji tinye mgbakwunye ahụ, mepee menu isi nke nchọgharị Mozilla Firefox, wee họrọ "Add-ons". Mgbe nke ahụ jiri nchọta ịchọpụta ma wụnye Download Enyemaka. Mgbe itinye ntinye, tinye ọ bụla egwu na ihe ọkpụkpọ, ma mgbe ị pịa bọtịnụ tinye-na ihe nchọgharị nchọgharị, ị nwere ike ịhụ na ị nwere ike ibudata faịlụ egwu ahụ (aha nke ga-agụnye nọmba, dịka na ụzọ mbụ e gosiri na ntụziaka a).